NepalUpclose.com - eKantipur - अफ्गानिस्तान र सुडानबाट नेपाल नियाल्दा
eKantipur - अफ्गानिस्तान र सुडानबाट नेपाल नियाल्दा
केही दिनअघि अफ्गानिस्तानमा स्कुल जानथालेका छात्राहरूको अनुहारमा तेजाव खन्याएको खबर सुनेर म स्तब्ध भएँ । मलाई याद आयो कसरी अफगानिस्तानको हेरात सहरमा बस्दा मैले मुस्लिम महिलाहरूजस्तै गरेर टाउकोदेखि खुट्टासम्म छोप्ने लुगा लगाउनुपथ्र्यो । म विवशतापूर्वक लगाउँथे र सोच्ने गर्थें, 'यो त केही समयका लागि हो । म घर फर्केपछि मेरो जीवन सामान्य नै हुन्छ । तर यी महिलाहरूको जीवन यसैगरी बित्थे, कति कठोर जीवन !' अफगानिस्तानमा ६ महिना बस्दा मैले धार्मिक मतान्धताको पराकाष्ठा देखें र मनमनै सोच्ने गर्थें, 'मेरो देशमा यस्तो मतान्धता छैन ।'
महिलाहरूले एक्लै बाहिर जान नपाइने, पुरूषको नाममा पाँच वर्षको सानो बच्चा भए पनि लैजानैपर्ने, बसको एउटै सिटमा पुरुषसँग बस्न नपाइने, मोटर र मोटरसाइकल चलाउन नपाउने आदि त छँदै थिए, कोही अविवाहित महिला गर्भवती भए वा विवाहित महिला बाहिरका पुरुषसँग हाँसेर कुरा गरे भने 'इज्जत' बचाउने नाममा ती महिलालाई ढुंगा हानेर वा झुन्ड्याएर मार्न सकिन्थ्यो । मलाई केही अफगानी साथीहरूले त्यस्ता महिलाहरूलाई झुन्ड्याउने रूखहरू पनि देखाएका थिए । मेरो मन थरथर काँपेको थियो त्यो सुनेर । धार्मिक मतान्धताले महिलाहरूमात्र होइन बालक, युवक र वयष्कहरूलाई पनि सताइरहेको छ । धार्मिक मतान्धताको कारणले गर्दा पुरुषहरूले पनि धार्मिक ग्रन्थबाहेक अरू किताब पढ्न पाउँदैनन्, धर्मका नाममा लड्न सानैदेखि प्रेरित गरिन्छ र साना बालक र किशोरीहरू बलात्कृत भएका अनेक घटना हुन्छन् । तर त्यस विरूद्ध उनीहरूले केही बोल्न सक्दैनन् ।
साथै जातिको नाममा त्यहाँको समाज यसरी बाँडिएको छ कि त्यहाँ एक भएर विकासका कार्य होला भन्ने त मानिसहरू विश्वासै गर्दैनन् । 'तिमी कसरी एक्लै अफगानिस्तान आयौ ? श्रीमानसँग नआउँदा पनि तिमीलाई पासपोर्ट दिएर पठाए ? कस्तो अचम्म रहेछ तिम्रो देशमा त ? तिम्रा धर्मगुरूले यसरी महिलाहरूलाई एक्लै बाहिर जान रोक्दैनन् ?' उनीहरूलाई म भन्ने गर्थें, 'मेरो देशमा सयौं जातजातिका र विभिन्न धर्मका मानिसहरू सँगै मिलेर बसेका हुनाले हामीकहाँ धार्मिक मतान्धता छैन । हाम्रा धार्मिक गुरूहरूले खाने, लाउने जस्ता नागरिकका अधिकारमा कुनै बन्देज लगाउन सक्दैनन् । हाम्रो देशमा एउटै गाउँमा विभिन्न थरीका चाडपर्व मान्ने, आफ्नै तरिकाले खानेकुरा पकाउने, अलग